KAONTERA VAOVAON’NY JIRAMA : Velon-taraina sy mikolay tanteraka ireo mpanjifa
Mikolay tanteraka ireo tokantrano mampiasa ilay “compteur intelligent” nozarain’ny orinasa Jirama ao Toamasina amin’izao fotoana izao. 20 novembre 2018
Araka ny fanazavan’ireo mpanjifa izay sendra anay, dia tsy misy fampilazana mialoha akory voarain’izy ireo fa tonga tampoka ao an-tokantrano ny mpiasan’ny Jirama ary milaza fa hanolo kaontera. Ny olana anefa dia matimaty lava ilay kaontera ka miteraka fahatapahan-jiro lava.
Miantso amin’ny findain’ny Jirama Toamasina ireo mpanjifa tapaka jiro. Mahazo kaody nefa tsy maharitra dia tapaka indray. Miverina miantso ny Jirama fanindroany, dia miantso ny mpanjifany mba hanatona eny amin’ny birao BazariBe ny Jirama.
Tonga eny amin’ny Jirama ny mpanjifa mangataka famerenana ilay kaontera teo aloha, saingy tsy mahazo valiny mahafa-po. Milaza ny eo anivon’ny Jirama Toamasina amin’ireo mpanjifa tonga manao fanamarihana fa tsy maintsy mandeha any amin’ny Jirama foibe Antananarivo manao fangatahana famerenana kaontera teo aloha.
Miantso ny Jirama ireo mpanjifa lasibatra mba hitondra vahaolana haingana amin’izao toe-draharaha izao. Mitarika fatiantoka amin’ny fihariana andavanandro mantsy ny tsy fahatomombanana ateraky ny kaonteran’ny Jirama vaovao io. Misy amin’ireo tokantrano tetezin’ny mpiasan’ny Jirama no mandà tsy hampiasa io kaontera vaovao io.